Imithetho Yendawo ye-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
IDubai yizwe elinesizotha
Ngabe uya e-United Arab Emirates kungekudala? Uma kunjalo, kunamasiko nemithetho embalwa okufanele uyikhumbule. Ngenkathi i-UAE ihamba kancane iyindawo enamakhompiyutha, ilandela isethi yemithetho futhi iqhuba ngendlela ehlukile kuleyo yenhlangano yaseNtshonalanga.
Imithetho namasiko aseDubai asekelwe ekuboniseni inhlonipho
Izidakamizwa azibekezelelwa e-UAE (kufaka phakathi insangu, eyamukelwa ngokusemthethweni emazweni amaningi aseNtshonalanga).
Izinhlawulo zokuthola, ukushushumbisa noma ukuthengisa izidakamizwa zinzima. Zisuka eminyakeni engu-4 ejele okungenani, ziye ezinhlawulweni zokufa.
Futhi, ezinye izidakamizwa zezokwelapha ezinemiphumela ye-psychotropic noma ye-narcotic azivunyelwe. Ukuthola uhlu lwamanani nezidakamizwa ongase uze nazo, hlola i- Umnyango Wezempilo e-UAE Iwebhusayithi.
Iminyaka yokuphuza ngokusemthethweni e-Abu Dhabi ineminyaka engu-18 - kodwa amahhotela awavunyelwe ukuphakela utshwala labo abangaphansi kweminyaka engama-21.
Kunikezwa ilayisensi yomfelokazi (kulingana nesimo). Ngakho-ke ilayisense kwenye i-emirate ayinikezi izimvume zokuphuza kwenye. Futhi, ukuthola ilayisense yotshwala kudinga ukuthi ube yisakhamuzi sombuso, noma kukhona okuhlukile.
Izivakashi eDubai zingathola ilayisense yenyanga engu-1 kubasabalalisi bayo aba-2 abasemthethweni. Ngokwengeziwe, bazonikezwa idokhumenti yokuqinisekisa ukuthi bayayiqonda yini imithetho ehlobene nokuthenga, ukuphuza, kanye nokuhambisa utshwala.
Umthetho we-UAE uyakwenqabela ukudakwa noma ukuthonywa umphakathi. Abantu bazo zonke izizwe bangaboshwa futhi babekwe amacala, ikakhulukazi uma ukudakwa kuphumela ekuziphatheni okucasulayo noma okungahlelekile.
Lokhu kusebenza nakwabagibeli abadakiwe ekuhambeni nge-United Arab Emirates.
Ubudlelwano Ngaphandle Komshado
Imithetho ye-UAE namasiko enhlalo akuvumeli ucansi ngaphandle komshado - noma ngabe unabuphi ubuhlobo nomlingani wakho. Uma kutholakala ukuthi kunobudlelwano bezocansi ngaphansi kwaleyo migqa, uzibeka engozini yokushushiswa, ukuxoshwa, noma ukuboshwa.
Futhi, lezo zinkambiso zibuye zande ziye endaweni yokuhlala. Labo abasebudlelwaneni ngaphandle komshado abavunyelwe ukuhlala ndawonye. Futhi, awuvunyelwe ukuthi wabelane ngegumbi lehhotela nomuntu wobulili obuhlukile (ngaphandle kokuthi bayisihlobo esiseduze).
Uma ukhulelwa ngaphandle komshado, ubeka engcupheni yokuboshwa nokuxoshwa (kanye nomlingani wakho). Ungacelwa ubufakazi bokuba nomshado ngesikhathi sokuhlolwa kwamantombazane.
Futhi, uma ungashadile futhi unengane, ungahle ube nezinkinga zokubhalisa ingane yakho entsha e-UAE, engahle iholele ekuboshweni noma ekudingisweni.
Ubuhlobo Bobulili obufanayo
I-UAE ayibuboni ubudlelwano bobulili obufanayo noma imishado. Ngokwengxenye enkulu, i-UAE yindawo ebekezelayo ehlonipha impilo yangasese. Kodwa-ke, kube nezindawo lapho abantu babeshicilelwa khona bezokwenza ucansi lobulili obufanayo (ikakhulukazi uma kwakubandakanya ukubonakaliswa kwothando komphakathi).
Lokhu kuyasebenza nakuma-expats kanye nezivakashi. Futhi kuleyo ndawo, sincoma ukufunda ngokujulile ngamalungelo e-LGBT ngaphambi kokuhamba.
Ukukhonjiswa Komphakathi Kwethando
Lezo zithathwa ngenkani e-UAE, kungakhathalekile ukuthi zinjani emshadweni. Futhi kube nezimo lapho imibhangqwana iboshelwe ukuqabulana phambi komphakathi.
Imithetho Yezindaba Nemithetho
Imithetho ye-UAE ayikuvumeli ukuthwebula izithombe noma imithombo yezindaba ngaphakathi kokufakwa okuningi kwezempi nohulumeni. Futhi, awuvunyelwe ukuthumela izinto (njengezithombe namavidiyo) ezigxeka izinkampani zakwa-Emirati, abantu, noma uhulumeni.
Ukugcona uhulumeni kubhekwa njengecala elinesijeziso. Futhi, kungcono uma ungathwebuli abantu emphakathini (futhi ikakhulukazi abesifazane emabhishi, okuholele ekuboshweni ngaphambili).
Kudingeka ilayisense kwimikhiqizo yabezindaba, ukudlulisa imininingwane, nokudlulisa imininingwane ephathelene neziphathimandla ze-UAE. Ukuthola eminye imininingwane ngamalayisense adingekayo, sincoma ukuvakashela i- Iwebhusayithi Yezindaba Zomkhandlu Kazwelonke!
Ingozi enkulu ekuphepheni kwakho eDubai ngokwakho
I-United Arab Emirates umbuso wamaSulumane ophethwe yi-Sharia Law. Ukuhlala ngaphandle kwengcindezi.